ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ- နိုဝင်ဘာလ Update ကို 2018 | USAHello | USAHello
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလာမယ့်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမှုအတွက်အောက်ပါ updated သတင်းအချက်အလက်များ.
အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် 19 နိုဝင်ဘာလ (နိုဝင်ဘာလ) 2018: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခရိုင်တရားသူကြီးသမ္မတအိမ်တော်အမိန့် Up ကိုရပ်တန့် 19 ဒီဇင်ဘာလ (ဒီဇင်ဘာလ).
ခေတ်မီ: အဆိုပါတရားသူကြီးသမ္မတအမိန့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏တရားမှဆန့်ကျင်ကြောင်းဆိုပါတယ်. အမေရိကန်ဥပဒေကိုအမေရိကန်နယ်မြေများတွင်ပုဂ္ဂိုလ်များခိုလှုံခွင့် applications များတင်သွင်းခွင့်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ပံ့. Aans ရန်သင့်အား entry ကို၏ဆိပ်ကမ်းမှတဆင့်လာရန်ရှိသည်. တွင် 19 နိုဝင်ဘာလ, တရားသူကြီးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအကျင့်တရားကိုလိုက်နာရမယ်လို့ဆိုပါတယ်.
Maalve သစ်ကို resolution ကိုဆိုလိုတယ်?
၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆိုလိုသည် 19 နိုဝင်ဘာလ / အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု entry ကိုတောင်းဆိုမှုများ၏ဆိပ်ကမ်းမှတဆင့်မလာဘဲသူကလူတွေကိုခိုလှုံခွင့်၏သင်တန်းတွင်အလုပ်လုပ်ရမည်ဟုနိုဝင်ဘာလ. အဆိုပါ resolution ကိုပြည်နယ်များ Apply ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များခွင့်ပြုရပါမည်. ဒါပေမဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ပေးသနားလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ. ဒါဟာ America မှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရရှိရန်နေဆဲအလွန်ခက်ခဲသည်.
ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်လျှောက်လွှာထဲမှာခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ၏အင်တာနက်ပေါ်တွင်အခွင့်အရေးများအပေါ်ဒုက္ခသည် status ကိုထောကျပံ့.
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Trump အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းနယ်စပ်အပေါ်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံကန့်သတ်ထားတဲ့အမိန့်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့. အသစ် resolution ကိုခိုလှုံခွင့်တောင်းခံအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ entry ကို၏ဆိပ်ကမ်းကိုသွားသင့်ကြောင်းထောက်ပံ့.
သောကြာနေ့ညသန်းခေါင်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသက်ဝင်စတင်မည်9နိုဝင်ဘာလနှင့်အဘို့ကြာရှည်ခံ 90 တစ်နေ့တွင်. အသစ် resolution ကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူမပါဘဲသားသမီးများလျှောက်ထားပါဘူး.
ဤပြောင်းလဲမှုကြောင့်လူ entry ကို၏ဆိပ်ကမ်းလွဲပြီးဘယ်နေရာမှာမဆိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ဝင်. မှန်လျှင်, ခိုလှုံခွင့် applications များတင်သွင်းခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်. အဲဒီအစား, သူတို့တရားမဝင်တိုင်းပြည်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပါလိမ့်မည်.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလာမယ့်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ၏ဥပဒေများအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုရှိခဲ့သည်. တွင် 11 ဇွန်လ 2018 ယူနိုက်တက်စတိတ်
အစိုးရရှေ့နေက Jeff Sessions မူရင်းကိုသူတို့နိုင်ငံတွေအတွက်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ဂိုဏ်းအကြမ်းဖက်မှုထွက်ပြေးနေကြသည်သူတွေကိုယေဘုယျအားဖြင့် America မှာခိုလှုံခွင့် applications များတင်သွင်းခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်.
သငျသညျမက္ကစီကိုနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြားနယ်စပ်မှလာမယ့်နေလျှင်ဤသည် Altgieraly ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံအပေါ်သက်ရောက်မှု. သငျသညျဂိုဏ်းအကြမ်းဖက်မှုဘဝကအန္တရာယ်များစေသည်ရှိရာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကနေလာကြပေမည်. သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်သားသမီးများစောင့်ရှောက်ဖို့အကြမ်းမဖက်အိမ်တအိမ်စွန့်ခွာစေခြင်းငှါ. အဆိုပါဥပဒေသစ်ကိုသင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အအကြောင်းရင်းခိုလှုံခွင့်မရနိုင်သည်ကိုပြောပါတယ်.
အမေရိကရှိဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းရရှိရန်အလွန်ခက်ခဲ. အများစုမှာခိုလှုံခွင့်တောင်းခံလကျမခံများမှာ. ပညတ္တိကျမ်းကိုသင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၏နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတစ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ရှိပါကသင်ခိုလှုံခွင့်တောင်းစေခြင်းငှါထောက်ပံ့:
ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားဖို့ကိုဘယ်လို – အင်တာနက်ပေါ်ရှိဒုက္ခသည်စင်တာကနေသတင်းအချက်အလက်
အားလုံးခိုလှုံခွင့်တောင်းခံခိုလှုံခွင့်ကိုသူတို့ကအမေရိကန်အစိုးရတို့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းစေခြင်းငှါသတိပြုမိဖြစ်သင့်ရှာကြံသင့်တယ် (အဆိုပါထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွင်နေအနိုင်အထက်ခံရ) ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာများအတွက်. သူတို့ကနယ်စပ်မှာရောက်လာသည့်အခါတချို့လူတွေကသူတို့သားများမှကွဲကွာခဲ့ကြ. မှစ. 20 ဇွန်လ, ဒီခွင့်မပြုပါ. မိဘများသူတို့ကလေးတွေကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အလုပ်လုပ်ကိုင်အုပ်စုများရှိပါတယ်. သင်တို့မူကားပြီးသားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကကျင်းပလျက်ရှိသည်လျှင်မည်သူမဆိုသင်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးများကိုကူညီလုပျဆောငျနိုငျကွောငျးအနည်းငယ်သာရှိ.
သင်တစ်ဦးရှေ့နေတောင်းခံရန်ရှိသည်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, သင်အကွံဉာဏျပိုင်ခွင့်ရှိသည်, သင်မူကားတစ်ဦးရှေ့နေကိုမေးသင့်တယ်. သငျသညျပွောသငျ့ “ယခုတွင်ငါသည်ရှေ့နေစကားပြောချင်”. သင်တစ်ဦးရှေ့နေမှဝင်ရောက်ခွင့်၏ညာဘက်ရသည်အထိသင်တစ်ဦးရှေ့နေမှသူနှင့်အတူစကားပြောလူတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ဆက်လက်ဝယ်လိုအား.
သငျသညျခိုလှုံခွင့်အင်တာဗျူးကူးမြောက်ခဲ့လျှင် (ကိုခေါ် “Khvfa Mvsvqa မှ”) , သင်ခိုလှုံခွင့်အဘို့သင့်အမှုလုပ်တရားသူကြီးတစ်ဦးရှေ့တော်၌ကြားနာရလိမ့်မယ်. ဒါဟာကြားနာရဖို့အလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာယူစေခြင်းငှါ. စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းဒါဟာသင့်ရဲ့လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရမည်.
သို့သော်ထိန်းသိမ်းရေးအချို့ကိုပင်အင်တာဗျူးဖြတ်သန်းပြီးနောက်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံကိုင်ပြီးစင်တာ. တွင်2ဇူလိုင်လ / ဇူလိုင်လ, ဖက်ဒရယ်တရားသူကြီး ICE ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းခိုလှုံခွင့်တောင်းခံပြီးနောက် reserved မဖြစ်သင့်ကြောင်းဆိုပါတယ်. သင်အင်တာဗျူးဖြတ်သန်းပြီးနောက်ပိတ်မိနေတယ်ဆိုရင်, ရှေ့နေမှပြောဆိုရန်မေးမြန်းပါ.
သငျသညျလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကောက်ခွန်သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်လွှာစဉ်အတွင်းသင်၏အဘသည်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးကနေထိန်းသိမ်းရေး၏အဆက်အသွယ်လိုင်းအစီရင်ခံကွဲကွာခဲ့ကြပါလျှင် (ICE) ASli ကပုံ 1-888-351-4024. အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုမရရှိနိုင်စပိန်စကားပြောအော်ပရေတာရှိပါတယ်. ကနေတနင်္လာနေ့ကနေသောကြာနေ့မှနာရီအလုပ်လုပ် 8:00 နံနက်မှ 8:00 ညနေ. (အရှေ့ပိုင်းအချိန်). သင်ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာ ICE အတွင်းကနေတောင်းဆိုနေကြပါတယ်လျှင်, မြန်နှုန်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအရေအတွက်အားကိုသုံးပါ 9116 # အခမဲ့ဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတွင်.
ဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေး၏ ICE ရုံးနှငျ့အလုပျလုပျ (ORR) ကလေးများနေရာချထားရန်. သင်တို့သည်လည်းအရေအတွက်က ORR မိဘနှင့်အတူသင်၏ hotline ဆက်သွယ်နိုင်သည် 1-800-203-7001 သငျသညျကိုအမေရိကန်အစိုးရသင့်ကလေး D ကိုیھတစ်ဦးထင်ခဲ့လျှင်. သင်ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာ ICE ကနေတောင်းဆိုနေကြပါတယ်လျှင်, မြန်နှုန်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအရေအတွက်အားကိုသုံးပါ 699 # အခမဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်အတွင်. ရရှိနိုင် 24 နာရီတစ်ရက်,7စပိနျသို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်နေ့ရက်များတစ်ပါတ်,.
သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် (သင်၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်သင့်မိသားစုဝင်များသို့မဟုတ်သင့်ရှေ့နေသို့မဟုတ်) e-mail, မှတဆင့် ICE သို့မဟုတ် ORR ကိုဆက်သွယ်ပါ:
Parental.Interests@ice.dhs.gov အတွက် E-mail ကို ICE
info@ORRNCC.com အပေါ် E-mail ကို ORR